လက်ရှိ ပို့ကုန်ဈေးကွက်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဈေးကွက်အသစ်များ ရှာဖွေ ထိုးဖောက်ရန် အစိုးရနှင?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၈
မြန်မာ့ ပို့ကုန်များအတွက် ရှိပြီးသားဈေး ကွက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်လို အပ်သကဲ့သို့ ဈေးကွက်သစ်များ ရှာဖွေရေးထိုးဖောက်ရန် အစိုးရ နှင့်ပုဂ္ဂလိကပူး ပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက် တာသန်းမြင့်ကပြောသည်။
သြဂုတ် ၁၈ ရက်က UMFCCI တွင်ပြုလုပ်သည့်မြန်မာ့ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင် ပို့ရောင်းချမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဒေါက်တာ သန်းမြင့်က အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမှာ အ ထိုက်အလျောက်တည်ငြိမ်နေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရရှိရေးကို အရှိန်အ ဟုန်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွင် မိမိ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းသက် သာမှုအရယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၊ ပို့ကုန် ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးအရ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၊ လိုအပ်သလို တင် ပို့နိုင်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာ အရ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ် ပြီး ထိုသို့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိမှသာကျယ်ပြန့်သော ပို့ကုန်ဈေးကွက် နှင့် ခိုင်မာသော ပို့ကုန်ဈေးကွက် များ တိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”ပို့ကုန်ပိုင်းမှာ ပို့ကုန်အမယ် သစ်တွေဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်သလို တန်ဖိုးမြှင့်ပို့ကုန်တွေပိုမိုတင်ပို့နိုင် အောင်ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းရှိပြီးသား ဈေးကွက်များ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ် သလို ဈေးကွက်များရှာဖွေထိုး ဖောက်ဖို့အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ပဲဈေး ကွက်ပျက်နေသည့် ယင်းနိုင်ငံကို လျစ်လျူရှု၍မရဘဲ ဈေးကွက် ဆက်ထိန်းထားရန်လိုအပ်ပြီး မြန် မာ့ပဲသည်ရေရှည်တွင် အလားအ လာရှိနေသေးသည့်အတွက် အ ရည်အသွေးကောင်းမွန်အောင် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပဲစားသုံးမှုများ သည့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင် အောင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ဒေါက်တာဇော်ဦးက ပြောသည်။
”အရည်သွေးမြင့်ဖို့ဆိုတာ ဓာတ်အြ<ွကင်းအကျန်တွေနည်းဖို့ ပိုးသတ်ဆေးတွေမလိုဘဲ မသုံးဖို့၊ ပညာပေးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေ တယ်။ ဓာတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေလည်း လိုနေတာ ရှိတယ်။ ဈေးကွက်ရရင်စိုက်ဖို့ အ ရင်းအနှီး၊ ခုစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ လောက်နဲ့မရဘူး။ တောင်သူ၊ ကုန် သည်လုပ်ငန်းရှင် သုံးဦးပေါင်းပြီး ဝိုင်းကြီးချုပ်နဲ့လုပ်တဲ့စနစ်မျိုး ဖော်ထုတ်သင့်တယ်။ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချပြီး ချေးငွေတွေဟာ ရှိသ မျှ အစုအဖွဲ့လေးတွေချေးလိုက် ရင် ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ လုပ် ငန်းကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံး မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို ဝိုင်း ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်က တာဝန်ခံ ပြီးချေးပေးမယ်ဆိုရင်ချေးငွေတွေ က ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဖြစ် လာနိုင်မယ်''ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုတိုးတက် ရေးအတွက် ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အ ရေအတွက်တိုးတက်ရေးအပြင် အရည်အသွေးအရပါ တိုးချဲ့တင် ပို့နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်း တွင်လည်း ရေရှည်စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင် မည့် ရင်းနှီးကုန်စည်များကို ပိုမို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ဆက်လက်ပြောသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှပဲဝယ်ယူ မှုကို ကန့်သတ်လိုက်သည့် အ တွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အများဆုံး တင်ပို့နေရသည့် မြန်မာ့မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံဈေးတို့မှာ ကျဆင်းနေ သည့်အတွက် လတ်တလောတွင် ယင်းပဲများအစား အခြားပြည်ပ ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများဖြစ်သော ဆန်၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ပဲ ပုပ်စေ့၊ မြေပဲ၊ နှံစားပြောင်း၊ ဝါ၊ နေကြာ၊ ကြံ(သကြား)တို့ကို ပိုမို စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်း စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနမှအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦး တိုးအောင်မြင့်ကပြောသည်။
”ကုန်လှောင်ရုံစနစ်တွေ ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။ ကုန်စည် ဒိုင်တွေမှာ ရောင်းကြဝယ်ကြ လှောင်ကြတယ်ဆိုတာအမြတ်အ စွံန်းတစ်ခုတည်းကိုကြည့်နေတာ။ခုချိန်မှာကိုယ့်အချင်းချင်းပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်တာထက် နိုင်ငံတ ကာကို ဈေးကွက်ကိုရအောင်ယူ ပြီး နိုင်ငံတကာကရမယ့် ဈေးကိုပို ပြီး အမြတ်များများကျန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို တောင် သူတွေ၊ ကုန်သည်တွေအချင်း ချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာကြ ဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကပြော သည်။ မြန်မာ့ပဲမျိုးစုံ၊ပြောင်း၊ နှမ်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲ တွင် ပဲစိုက်တောင်သူများက ၎င်းတို့ကို စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများလုံ လောက်စွာချေးပေးရေး၊ စိုက်ပျိုး ရေ လုံလောက်စွာပေးနိုင်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းပညာများ အကူအညီ ပေးနိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ ခဲ့ကြသည်။
သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင် အသစ်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊ မီဒီယာ ဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေး အဓိကဆောင်ရ
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကုလအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန
မလေးရှား ဖိတ်ခေါ် လူငယ်နှင့် အလွတ်တန်း နိုင်ငံတကာ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ရွှေတံဆိပ်ရရှ??
လက်ထပ်ဖို့ အလျင်မလိုသေးတဲ့ မင်းသား အော်လွန်ဒိုဘလွန်းနဲ့ အဆိုတော် ကေတီပယ်ရီ
နိုင်ငံတကာ၏ပြောဆိုဖော်ပြမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်မည့် နိုင်ငံ?